Mozambique - Zimbabwe Embassy Staff Go On Strike - Unpaid for Three Years - allAfrica.com
Mozambique - Zimbabwe Embassy Staff Go On Strike - Unpaid for Three Years
Staff at Zimbabwe's embassy in Mozambique reportedly went on strike Monday, protesting against unpaid salaries in a new diplomatic embarrassment for the embattled Harare administration.
The reports come at a time when Britain's foreign office recently revealed that the Zimbabwean embassy in London was among the top three tax-dodging foreign missions based in the UK.
"We have opted to go on strike because the Zimbabwe Embassy workers are facing problems getting salaries, and some have not been paid for the past three years and it is no clear why this is happening," an embassy employee told the privately-owned television station Soico (Stv).
Earlier this month, the British government revealed that Zimbabwe's embassy in London owed some US$129,000 in unpaid taxes.
Meanwhile the Maputo strike coincided with mayhem back home as outraged Zimbabweans protested against the government's weekend decision to hike fuel prices.
Top Headlines Mozambique Governance Zimbabwe
"We express our deepest condolences to the bereaved families," he said in a statement cited by the state media.